Iyo iPhone 7 wallpapers ndeyekugunun'una kune yekutanga iMac | Ndinobva mac
Ndinofanira kubvuma kuti handina kunge ndiri munyika yeApple kwenguva yakareba, kutaura zvazviri, ndinoshanda zuva nezuva neMac uye neWindows PC, tinogona kutaura muzvikamu zvakaenzana. Nezuro ndakaburitsa muApple News chinyorwa chandakakuratidza kuti sei teerera iyo nyowani iPhone 7 wallpapers, wallpapers izvo zvinongowanikwa chete pane izvo zvigadzirwa zvemhando natively. Asi kana usiri kuronga kumutsiridza yako iPhone, kuburikidza nechinyorwa ichi unogona kurodha pasi nekuvawedzera kumashure kwe iPhone yako zvisinei nemhando yacho.
Nekuda kwekusaziva kwangu kweakange apfuura Apple mhando, mushandisi akandiudza kuti iwo mapikicha aive rakafemerwa neyekutanga iMac mamodheru iyo kambani yakaburitswa muna 1998, mhando dzaive dzekutanga kuvhara iyo floppy drive iyo yakawanda yakaipa nguva yatipa isu tese (zvirinani murwi mukuru), kunyanya payakatanga kutinhira nekuti yainge yawana chakaremara chikamu, icho chaimboreva kureva kuti isu takarasikirwa. zviri mukati meiyo floppy disk.
Iyi yekutanga iMac modhi yaizivikanwa nekuve iyo yega iMac yaisanganisira CRT yekutarisa, iyo gumi neshanu shanduro dzakatangwa umo processor, RAM, hard disk uye Optical drive yaisiyanisa kumhanya. Asi yaive zvakare yekutanga modhi kuendesa nefloppy disk drive, ichisiya CD drive uye USB ports senzira yega yedata (makore maviri gare gare iyo yekutanga pendrives yakatangwa). Iyi modhi yakavhurwa mune akasiyana mavara, mavara anoenderana chaizvo nemadonhwe anoratidzwa pane iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus mifananidzo.
Apple yanga ichida wink neiyo nyowani iPhone kune veteran yekutanga-chizvarwa iMac, imwe modhi yaive pamberi penguva yayo nekubvisa periipheral inoshandiswa zvakanyanya kutenderera pasirese, sezvazviriwo kune 3,5-millimeter headphone jack pane iyo iPhone 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » IPhone 7 wallpapers ndeyekugunun'una kune yekutanga iMac
Ndini ndega ndisingaoni iwo mashure pane matte nhema iPhone 7? 😀
Kwete, neniwo handioneke
Chikamu chewebhu cheMac Pro zvinochengeterwa zvimwe zvirimo